I-TECH ne-TELECOM Ingobo yomlando - Thumela RELAY
Uhlelo lokuxhumanisa i-coronavirus lwaseNgilandi oluhlaziyiwe ...
brylandobe Agasti 14, 2020 0
Uhlelo lokulandelela ukuthintana kwe-coronavirus eNgilandi oluvuselelwa kabusha luthola ukukhanya okuluhlaza kokuhlola ukulandelwa kohlelo lokuxhumana kwe-coronavirus eNgilandi kusetshenziselwe ukuqala izilingo ...
I-Facebook yengeza `` Izithombe ze-'Blackface '' kokuthunyelwe okuvinjelwe i-Facebook ivuselele imithetho yayo ukuze iphathe okuthunyelwe okuqukethe ukubonwa kwe-'bluas 'ne-stereotypes evamile yama-anti-Semitic. Kwakhe…
I-Xiaomi yembula i-TV esobala ebonakalayo
Uma amathelevishini ethu anamuhla anamandla okwazi ukuhlaba umxhwele, uma esecishiwe, ahlala amathayili amnyama alula. Kunzima ukuhlanganisa, ngisho nangaphezulu ukufihla, egumbini lokuhlala. Abanye abakhiqizi ...
Umnikazi we-WeChat uzishaya indiva isiphakamiso sikaTrump esivinjelwe sase-US
Umnikazi we-WeChat ulahla ukunqatshelwa kukaTrump okwenqatshelwe yi-US Tencent kwehlisa ukuvinjwa kukaDonald Trump kuhlelo lakhe lokusebenza lwe-WeChat, ekholelwa ukuthi kuzothinta kuphela ukusebenza kwakhe kwe-US. Isiqhwaga se ...
Okokugcina kithina 2: Isibuyekezo esinemininingwane simenyezelwe kusasa
Inja eyi-Naughty ithuthukisa okuqukethwe kwe-The Last of Us 2 ngezinga elinzima lobunzima, imodi yokufa unomphela noma izinketho eziningi zokushintsha i-adventure ka-Ellie. var quads_screen_width =…
Namuhla, zenzele isipikha se-Ultimate Ears Boom 3 sika-99 €
UPierre Bourgès - Agasti 12, 2020 - TechThe Ultimate Ears Boom 3 ishibhile eDarty.fr namuhla. Kuhweba kuma-euro angama-99 esikhundleni se-149 lapho yethulwa. Ukuphromotha okukhulu ukujabulela amaholide ngomculo. Zonke izinsuku,…
1 2 3 ... 62 olandelayo